Mandria any Java " Journey-Assist - Nosy Java. Indonezia
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Java
Fampahalalana ankapobeny momba ny Java
Java dia iray amin'ireo nosy indoneziana manan-danja sy mahaliana indrindra. Io no ivon-toekarena, kolontsaina ary politika lehibe indrindra eto Indonezia. Eto ianao dia afaka mahita tsangambato mahatalanjona mahatalanjona eo amin'ny tantara ary hahafantatra ny natiora exotic, izay manintona ny mpizahatany toy ny tanàna sy tempoly Java.
Ny toetrandro amin'ny nosy Java
Ny toekarena. Ny vola Java. Fifanakalozana fifanakalozana
(amin'ny antsipiriany momba fifandraisana finday sy Internet Java dia azo ekena HERE)
(amin'ny antsipiriany momba fahazoan-dàlana Raha hitsidika an'i Java ianao dia afaka mahita HERE)
Ny jeografia tany Java
Java dia hita eo anelanelan'ny. Sumatra (izay eo amin'ny ilany andrefan'ny Java), eo ho eo. Bali (eo amin'ny ilany atsinanana), amin'ny. Borneo (eo amin'ny ilany avaratra) ary momba ny. Krismasy (amin'ny lafiny atsimo). Isan'ireo nosy eran'izao tontolo izao, i Java dia 13 no lehibe indrindra any amin'ny faritra. Java dia voahodidin'ny Ranomasina Java eo amin'ny ilany avaratra, ny Selat Sunda eo amin'ny lafiny andrefany, ny Ranomasimbe Indianina eo amin'ny lafiny atsimo ary ny sisintanin'i Madura sy Bali any atsinanana.
Saika ny volkano manontolo no niandohany. Eto amin'ity nosy ity dia tendrombohitra 38 no misy tendrontany iray. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia volkano mavitrika. Ny toerana avo indrindra amin'ny nosy dia ny tendrombohitra Semeru (hahavony - 3676 m). Ny volkano mavitrika be indrindra any Java sy manerana an'i Indonezia dia Merapi (haavon'ny - 2930 m). Tendrombohitra tanteraka manodidina. Java mihoatra ny 150.
Ny tendrombohitra maro dia mizara ny faritry ny nosy manontolo ho faritra mitoka-monina mety amin'ny fambolena vary. Ny tanimbary any Java no anisan'ny lonaka indrindra eto an-tany. Ity nosy ity ihany koa no ivon'ny fambolena kafe any Indonezia. Ankehitriny dia ambolena eo amin'ny lembalemban'i Ijen izy roa amin'ireo tompona tanety kely sy mpamboly lehibe.
Ny faritanin'i Java dia manana velarana manodidina ny 132 metatra toradroa. km. Ny halavany avy any andrefana ka hatrany atsinanana dia manodidina ny 000 km, avy any avaratra ka hatrany atsimo - manodidina ny 1 km. Ny renirano Java lava indrindra dia ny Solo. Sahabo ho 000 km ny halavany. Ny loharanon'ny renirano Solo dia ao amin'ny afovoan'i Java, avy eo dia mankany amin'ny faritra avaratra atsinanana. Ny vavany dia ao amin'ny Ranomasina Java akaikin'i Surabaya. Ny renirano lehibe hafa any Java dia i Brantas, Tsimanuk, Tsitarum, Serayu.
Toetany any Java
Ny toetrandro any Java dia tropikaly, mampiavaka ny fiovan'ny toetr'andro tsy dia manandanja mandritra ny taona (mazàna ao anatin'ny + 27 ... + 33).
Misy vanim-potoana roa eto - fahavaratra sy ririnina. Orana ny vanim-potoana ririnina, maina ny vanin-taona mafana, nefa amin'ny ankapobeny dia nosy manana toetr'andro mando be i Java. Ny salan'isan'ny hamandoana eto dia 80 isan-jato. Mandritra izany fotoana izany, ny andrefan'ny Java dia manana toetrandro mando kokoa raha oharina amin'ny atsinanana. Be ny orana latsaka any andrefana, indrindra ny faritra be tendrombohitra. Noho izany, ny havoanan'i Parahyangan any andrefan'ny nosy dia manana rotsakorana mihoatra ny 4 mm isan-taona, ary avaratra atsinanan'ny Java - 000 mm fotsiny.
Amin'ny ankapobeny, ny vanim-potoana ambony ao Java dia manomboka amin'ny volana Aprily ary mifarana amin'ny Oktobra, miampy na minus isam-bolana. Ny ambiny sisa eto dia vanim-potoana ambany, i.e. orana matetika sy orana lava.
Widget fiarahan'ny toetr'andro. Misafidiana takelaka (rivotra, onja, varatra, sns) ary jereo ny toetry ny andro sy ny toetr'andro ao amin'ny nosy Java
Natiora ao Java
Ny biby manankarena ao Java dia nanimba ny fahatongavan'ireo eoropeana tany amin'ny nosy. Faly izy ireo nihaza biby faran'izay maty.
Saika ringana tanteraka ny tontolon'ny taom-bozaka Java, izay novonoina voalohany noho ny tandrony. Ny fiantraikan'ny fihenan'ny nomerao amin'ity biby ity dia ny fitomboan'ny lanjan'ny tandrony eo amin'ny tsenan'ny mainty. Izao any amin'ny nosy izao dia miaina amin'ny latsaky ny 100 amin'ireto rhinos ireto.
Kisoa Java, kanchil, leoparda, banteng, vorombola maitso - tsy ny biby rehetra izay miaina irery irery. Java ary tsy misy toerana hafa eto amin'izao tontolo izao. Atahorana ho lany tamingana ny ankamaroan'ireo karazana ireo. Narovan'ny fanjakana izy ireo.
Voasasa amin'ny ranomasina Java i Java. Ny zavamaniry dia tena isan-karazany eo amin'ny hazo bitika, ary koa eo akaikin'ny vatohara. Ho fanampin'ny karazan-trondro ara-barotra (herringana, mackerel soavaly, tuna, mackerel), biby miharo-tena toy ny era-morona, tsatokazo, tsaramaso ary antsamotady maro samihafa hita eto amin'ity ranomasina ity.
Java no nosy be mponina indrindra eto an-tany.
132 000 metatra toradroa ny faritra. km, ary ny vahoaka dia mihoatra ny 140 tapitrisa. Araka izany, ny isam-ponin'ny mponina eto dia 000 olona / sq. km. Java no toerana onenan'ny maro an'isa (000 isan-jato) amin'ny mponina Indoneziana manontolo. Ambonin'izany, ao anatin'ny nosy ny tenany dia ny ampahany amin'ny faritra andrefana dia ahitana ny haben'ny mponina avo indrindra. Mirakitra ny tanàn-dehibe rehetra eto Java. Noho izany antony izany, ankoatry ny tahan'ny fiterahana, mihabetsaka koa ny mponina noho ny fifindra-monina avy any atsinanana sy afovoan-tany.
Miaraka amin'ny isan'ny mponina ao Java dia mitovy homogeneous ara-pirazanana izy io. Ny etnônita manjakazahana dia Java (monina afovoany sy andrefan'ny nosy izy ireo). Ny foko faharoa amin'ny lafiny isa dia ny Sunda (monina any atsinanana sy atsimon'i Java ny ankamaroany). Ny foko fahatelo dia ny Madoreana, izay any amin'ny nosy maherin'ny 10. Tonga tany Java ny Madoreana tamin'ny taonjato faha-000 ary manana ny kolontsaina sy ny fiteny tsy manam-paharoa izay tsy mitovy amin'ny Javaney sy Sundianina.
Ankoatry ny fitenin'ny olona ao aminy, ny olona rehetra monina ao Java dia mahatakatra ny teny indoneziana - ny fiteny ofisialin'i indonezia. Amin'ny fiainana andavanandro, ity fiteny ofisialy ity dia miteny (ary heverina ho tompon-tany) amin'ny mponina 20 000 000 eo ho eo amin'ity firenena ity ihany, na izany aza, matetika, Sund, Java ary Madoreana no mifampiresaka amin'ny teny indoneziana amin'izy ireo.
Mikasika ny fivavahana kosa, araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2000, ny 86,1% ny mponin'i Java dia Silamo, ny 5,7% dia Kristiana Protestanta, ny 3% dia Kristiana Katolika, ny 1,8% dia Hindoa, ny 3,4% dia Bodista. ary mpanaraka fivavahana hafa. Nosy àry izy ary misy mponina Silamo betsaka indrindra.
Ny iray amin'ireo zavatra mahasarika indoneziana dia ny Tempolista bodozy Borobudur. Tamin'ny andro taloha, ny nosy Java dia tsy nifikitra tamin'ny toerana iray, ary noho izany dia nanova ny toerany hatrany izy, namakivaky ny ranomasina, izay tsy nahatonga ny ahiahy teo an-toerana. Nanapa-kevitra izy ireo fa hanamboatra ilay nosy amin'ny alàlan'ny fantsika mankany afovoan-tany. Ary rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia nisy havoana iray niorina manodidina ny tendrombohitra, izay nanodidina ny mponin'ilay nosy nanorina tempoly, ahitana ny fampianarana Buddhista ny valo mitondra mankany amin'ny fahazavana, ny dingana ary maneho ny firaisana amin'ny avo miaraka amin'ny any ambany, ny lanitra sy ny Tany, andriamanitra miaraka amin'ny olona. Ny rihana voalohany, ambanin'ny tranobe dia midika tontolo tontolo filan'ny nofo, ny gorodona efatra manaraka dia niresaka momba ny tolona nataon'ny olona amin'ny faniriany, ary ny andiany telo farany dia tandindona ny fomba hahazoana fandriampahalemana tanteraka, nirvana.
Ny fanintonana faharoa, manintona ny mpizahantany maro be erak'izao tontolo izao, dia ny tempolin'i Prambanan any amin'ny moron-dranomasin'i Merapi. Ny firafitry ny tsangambato, natsangana tamin'ny fiandohan'ny taonjato X, dia misy tsipika 4 izay manodidina ny rindrina efatra misy vavahady 4. Ny nosy Java, izay misy ny renivohitra Indoneziana dia mandeha ao anaty rano amin'ny hafainganam-pandeha 10 santimetatra isan-taona.
Toekarena ny Nosy Java
Java no faritra mandroso ara-toekarena indrindra ao Indonezia. Raha ny angom-baovao 2012, Java no mamokatra 57,51% amin'ny harin-karena faobe any Indonezia.
2/3 amin'ny fitambaran'ny faritra manerana ny nosy dia tany fambolena. Ny voly toy ny sesame, akondro, durian, manga ary kôka dia maniry amin'ny fihinanana trano. Kafe, dite, gilasy, sigara, quinine, landy, siramamy, voaniho dia atondrana any an-kafa. Java dia mamaritra ny tany tena mahavokatra noho ny fananany fotoana maharitra miaraka amin'ny lavenona avy amin'ny volkano.
Ny menaka dia vokarina any amin'ny faritra Arjuna akaikin'ny morontsiraka avaratra andrefana. Izy io dia avy amin'ny orinasa any Surabaya sy Chilakap. Solifara, manganese, volamena, volafotsy, ary potiôsa dia minitra voafetra ao anatin'ny habetsahany voafetra.
Tanànan'ny Surabaya any Java
Ny asa-tànana nentim-paharazana dia ny famokarana lamba nolokoina antsoina hoe batik, akanjo, vokatra vy, firavaka, fitaovana fambolena, vokatra vita amin'ny hoditra sy keramika. Ny orinasam-pamokarana lehibe dia mamokatra lamba, fiara, labiera, kiraro, simenitra, taratasy ary sigara. Ny seranana lehibe any Java dia i Tanjung Priok sy Surabaya.
Vola any Java. Fifanakalozana fifanakalozana
(Antsipiriany momba ny vola, karatra plastika ary fifanakalozana fifanakalozana any Java eto)
Any amin'ny toerana fizahan-tany dia azo atao ny mandoa vola amin'ny vola Indoneziana sy dolara amerikana, saingy ny tahan'ny tranga farany dia tena tsy hahasoa. Ary tsy azo atao na aiza na aiza io. Ny safidy tsara indrindra dia ny mitondra dolara miaraka aminao, ary avy eo hatakalo vola amin'ny Java.
Na dia tao anatin'ny 100 taona lasa izay, i Java dia niharan'ny fiovan'ny lalina tamin'ny androm-piainana rehetra, mbola miroborobo eto ny asa tanana. Voalohany indrindra, ny mpanao asa tanana Java dia malaza amin'ny fitaovam-piadiana tena tsara ananany, izay ankasitrahan'ny mpanangona sy mpihaza manerana an'izao tontolo izao. Sady mahay manao firavaka tsara tarehy ihany koa ireo mpanao asa tanana eo an-toerana.
Borobudur. Java. Indonezia
Ao amin'ny faritra afovoan'i Java dia afaka mahita ilay tempolista bodista lehibe indrindra eto ambonin'ny Tany ianao, antsoina Borobudur. Ity dia trano fitambaran'ny maritrano izay misy ny sary sary sokitra Buddha an-jatony ary vonjy rano vaky miaraka amin'ny foto-pinoana.
Fitateram-bahoaka any Java
Ny fanamboarana fotodrafitrasa momba ny. Java dia tsara kokoa noho ny any amin'ny nosy Indoneziana rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ny habetsaky ny mponina be dia be dia be mahatonga ny vahoaka be mandritra ny ora maika.
Bus any Java
Ny bisy no endrika fitateram-bahoaka mety indrindra sy lafo vidy indrindra eto amin'ny nosy, izay mitovy amin'ny fitsangatsanganana fohy ao anatin'ny tanàna, ary amin'ny dia lavitra iray mankany amin'ny faran'ny Java iray hafa. Ny saran-dàlana dia manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 000 any Indonezia.
Ny fandehanana amin'ny lamasinina dia somary lafo kokoa. Mandritra izany fotoana izany, Java dia iray amin'ireo nosy roa manerana an'i Indonezia, izay misy lalamby amin'ny ankapobeny.
Lamasinina tany Java
Any amin'ireo tanàn-dehibe, toa an'i Jakarta, Semarang, Surabay, ny fitateram-bahoaka lehibe dia ny bus mitondra ny orinasam-panjakana sy ny mitondra tsy miankina. Tsara homarihina fa saika misy ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, ka manangona mpandeha amin'ny toerana rehetra amin'ny làlan'ny fangatahan'izy ireo voalohany. Ireo lalan'ny fiara fitaterana no novonjen'ny fiaran-dalamby mandeha amin'ny fiaran-dalamby ambanin'ny tany miaraka amin'ireo fiaran'ny kilasy maromaro.
Ny kalitaon'ny lalana an-dalamben'i Java dia ambany noho ny any Eoropa tandrefana, ary somary ambany dia ambany ny saran-dalana amin'ny lalana mankany. Noho izany, raha manana zo ianao dia afaka manofa fiara. Na izany aza, tokony ho tsaroana fa vitsy ny famantarana eny an-dàlana, ary ny mpitondra fiara mandeha an-toerana hatrany no manitsakitsaka ny fitsipika.
Ilaina ny mandamina fiantohana fitsangatsanganana, izay handrakotra ny fitsaboana ara-pitsaboana klinika iraisam-pirenena. Java dia tsy faritra malaria, noho izany dia tsy ilaina ny fanaovana vaksiny raha fikasana dia voafetra ho any amin'ny faritanin'i Java ihany.
(azonao jerena bebe kokoa momba ny serasera finday sy ny Internet Java HERE)
Telkomsel dia sampana finday an'ny Telkom Indonesia. Izy io no lafo indrindra amin'ny filan'ny mpizahatany mahazatra. Telkomsel dia mahatratra 40 isan-jaton'ny tsenan'ny serivisy finday any Indonezia. Io no hany mpandraharaha finday miasa amin'ny faritany rehetra eto amin'ity firenena ity, tsy ankanavaka. Manana karazana karatra SIM maromaro izy:
Kitapo eo an-toerana. 3000 minitra ao amin'ny tambajotra ho an'ny 58 400 rupees ary 16500 minitra amin'ny tambajotram-pifandraisana rehetra XNUMX rupees isam-bolana.
Ny fonosana malaza indrindra amin'ireo mpizahatany. Ity fonosana 4G ity dia mitentina Rs 10k, manana quota isan'andro 300MB, 5000 rupees isaky ny kaonty finday ary manan-kery mandritra ny 30 andro. (Amin'ny antsipiriany)
Ireo fonosana dia mifantoka indrindra amin'ireo izay mandalo eto amin'ny firenena. Izany hoe, manana fe-potoana fohy dia fohy izy ireo. Azonao atao ny mandray azy manokana amin'ny fifandraisana am-peo mandritra ny 60 minitra antso, Rs. 2000, na amin'ny 47000 Rs mandritra ny telo andro amin'ny Internet 15 GB. (Amin'ny antsipiriany)
Site ofisialy www.telkomsel.com
Fantaro ny fandanjalanjana sy ny fiafaran'ny vanim-potoanan-kevitra: * 888 # (vanim-potoanan-kevitra)
Fifandanjana ny fifamoivoizana amin'ny fonosana sy bonus: * 889 #
Java - faritanin'i Indonezia
Ireo fitaovana finday any Java